Daawo Mu’asasada Al-malaaxim Oo Soo Saartay Filimkii La Wada Sugayay. – Calamada.com
Daawo Mu’asasada Al-malaaxim Oo Soo Saartay Filimkii La Wada Sugayay.
calamada September 5, 2018 3 min read
Filimka waxaa lagu daahfurayaa bayaan ka soo baxay lajnada amniga oo lagu shaacinayo qabashada shabakad dhameystiran oo u shaqeynayey sirdoonka sacduuiga, islamarkaana loogu mahadcelinayo dhamaan cutubyadii mujaahidiinta ee ka qeybqaatay howlgalkaas barakeysan.
Khaalid bin Saalim oo ku magacdheer Jacquub Al-Xadrami ayaa ah ninka ugu halista badan ee ka tirsanaa shabakadan sida lagu sheegay filimka, waxaana uu muddo dheer ka tirsan maktabka amniga ee Mujaahidiinta. Al-Malaaxim waxay sheegtay in ninkan aanan la soo gudbin karin damibyada uu ku lug lahaa iyo shaqooyinkii uu ku howlganaa maadama uu ku dhexjray daa’iro xasaasi ah.
Jaasuus xiga wuxuu ahaa Rashaad Qurashi Cuthmaan oo ku magacdheer Abuu Turaab As-Sudani, wuxuu ka mid ahaa shabakada jawaasiista ee gacanta lagu dhigay. Wuxuu ku lug lahaa howlgalkii lagu khaarijiyey Sheekhii Amiirka ahaa, Abuu Basiir Naasir Al-Wuxeyshi.
Abuu Turaab wuxuu sidoo kale ka dambeeyey duqeyn lagu beegsaday gaari uu lahaa maktabka maaliyada oo ay la socdeen walaalaha kala ah. Xamza As-Suumaali, Abuu Cabdi Raxmaan As-Sancaani, iyo walaalo kale, iyadoona ay halkaas Mujaahidiintu kaga gubatay lacag gaareysa 70 milyan oo dollar oo saarneyd gaariga sida lagu sheegay filimka.
Jawaasiista kale ee lagu soo bandhigay filimka ayaa mid waliba oo ka mid ahaa wuxuu ka qeybqaatay ama ka dambeeyey duqeymo lagu beegsaday saraakiil, culimo iyo hogaamiyeyaal ka tirsan Mujaahidiinta kuwaas oo uu ku jiro Sheykh Ibraahim Ar-Rubeysh, Sheykh Nabiil Ad-Dahab, Sheykh Naril Aanisi, Sheykh Ma’muun Xaatim, Abuu Haajir Al-Xadrami, Khowlaan As-Sancaani iyo tobanaan ka mid ah saraakiisha meydaaniga ee ururka.
Filimku wuxuu soo bandhigayaa malafka jawaasiis kale oo iyagana ku lug lahaa howlo basaasnimo oo ka dhan ah Mujaahidiinta, waxaana ka mid ahaa Jaasuus lagu magacaabo Cusmaan Shire Jaamac oo ka soo jeeda Soomaaliya, una shaqeynayey dowladaha Kenya iyo Jabuuti.
Muuqaalka waxaa lagu soo gudbinayaa kalimad uu jeedinayo Sheykh Ibraahim Abuu Saalix, Mas’uulka maktabka amniga ee Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziirada carabta kaas oo Mujaahidiinta ku boorinaya in ay dhuuxaan duruusta iyo cibrada kujirta filimkan iyo xalaqaatka ka dambeeya, wuxuuna sheegay in guushan aysan ahayn mid u gaar ah tandiimka oo kaliya balse ay tahay guul u soo hoyatay Umadda oo dhan.
Halkan Ka Daawo Filimka Al-malaaxim.
Halkan Ka Degso Filimka Al-malaaxim.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.25-12-1439 Hijri.
Next: Dagaal Culus Oo Markale Ka Dhacay Degmada Qoryooley.
2 thoughts on “Daawo Mu’asasada Al-malaaxim Oo Soo Saartay Filimkii La Wada Sugayay.”
mashaalah jawaasiist weey jabeen walaahi bilaaha inaanan nin mujaahid oo walaalkeey ah aanan lacag ku badaleen, nimakaas hala badilo waliba si xun baabuur hoosta haloo xiro